ချမ်းချမ်းနဲ့ဘုဏ်းသိုက်တို့ ဇနီးမောင်နှံကွာရှင်းသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဆရာကြီး ဦးထွန်းလွင် ( မိုးလေ၀သ ) ပြောပြတဲ့ အဖြစ်အပျက် – WunYan
ချမ်းချမ်းနဲ့ဘုဏ်းသိုက်တို့ ဇနီးမောင်နှံကွာရှင်းသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဆရာကြီး ဦးထွန်းလွင် ( မိုးလေ၀သ ) ပြောပြတဲ့ အဖြစ်အပျက်
whuk-46651 | November 26, 2017 | Social Media | No Comments
အဆိုတော်ချမ်းချမ်းနဲ့ သရုပ်ဆောင် ဘုဏ်းသိုက်တို့ ဇနီးမောင်နှံကွာရှင်းခွင့်တောင်တဲ့သတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဆရာကြီး ဦးထွန်းလွင် ( မိုးလေ၀သ ) က သူ့ဘ၀ရဲ့ အတွေ့အကြုံတစ်ခုကို အောက်ပါအတိုင်းပြောပြခဲ့ပါတယ် ။
ဒီကနေ့မှ ပြန်ကြည့်ဖြစ်တဲ့ facebook ပေါ်မှာ နိုင်ငံကျော်အဆိုတော်မလေးနဲ့ မော်ဒယ်လ်သူ့ယောက်ျားလေးတို့ဇနီးမောင်နှံကွာရှင်းခွင့်တောင်တဲ့သတင်းကိုဖတ်မိတယ်။ အဆိုတော်မလေးနာမည်ကြီးတုန်းကပေါက်သွားခဲ့တဲ့ သူ့ရဲ့ Title song က ဘာတဲ့ “တကယ်ဆို အချစ်ပဲ လိုတယ်” တဲ့။
လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ထဲကလည်း ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် မင်္ဂလာအခမ်းအနားမှူးလုပ်ပေးခဲ့တဲ့တပည့်လင်မယားနှစ်ယောက် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှာ အောက်ခြေ၀န်ထမ်းဘ၀ကစပြီး ပြည်ပသွားတာဝန်ထမ်းဆောင်ခွင့်ရလာတဲ့အထိ ဒိုးတူဘောင်ဖက် ခက်ခက်ခဲခဲ ကြိုးစားလာခဲ့ပြီး၊ နှစ်ယောက်သားလည်းကိုယ်စီကိုယ်စီပြည်ပနိုင်ငံရုံးတွေမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခွင့်လည်းရရော လင်မယားကွဲကြပြန်တယ်။
အမေမတူအဖေမတူလူသား(၂)ဦးအတူ ယှဉ်တွဲနေထိုင်ဖို့ဆိုတာ အကယ်တော့မလွယ်လှပါဘူး။ ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော်လည်း ကျွန်တော့အိမ်ထောင်ရေးကိုဘယ်လိုအတွေးမျိုးတွေနဲကထိန်သိမ်းခဲံတယ်ဆိုတာ လူငယ်တွေကို ပြန်ပြောချင်လာပါတယ်။
မောင်ထွန်းလွင် (မိုးလေ၀သ)ရဲ့ “ငယ်ချစ်….နှင့်” စာအုပ်မှ။
ကျွန်တော့်ဇနီးကို ကျွန်တော် ပြည်ပနိုင်ငံကြီးတစ်ခုမှာ ၁၉၇၃ ခုနှစ်လောက်မှာ စတင်တွေ့ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်က အစိုးရရဲ့ ခွင့်ပြုချက်နဲ့ အဲဒီနိုင်ငံကြီးကို ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်နဲ့ ပညာတော်သင်သွားရတဲ့အကြိမ်ပေါ့။ အဲဒီအချိန်မှာ အဲဒီနိုင်ငံရဲ့ သတင်းဌာနကြီးတစ်ခုမှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ရင်းနဲ့ သူတို့ မိသားစုက ကျွန်တော့်ထက် အရင် နှစ်နှစ်လောက်ကတည်းက ရောက်နှင့်နေခဲ့ကြတာပါ။
ဒီခရီးဟာ ကျွန်တော့်ရဲ့ ပထမဆုံးပြည်ပခရီးလည်း ဖြစ်နေတာကြောင့် ကျွန်တော်ဟာ တကယ့်ကို တောသားမြို့ရောက် ပါပဲ။ အရာရာဟာ အထူးထူး အဆန်းဆန်းချည်းပါပဲ။ အတွေ့အကြုံကလည်း မရှိ၊ အသိအကျွမ်းကလည်း မရှိ၊ ဘာဆိုဘာမှ မသိ နတ္ထိ။ မျက်စိသူငယ် နားသူငယ်ဆိုတာ ဒါကိုခေါ်တာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
အဲဒီအချိန်မှာ ကျွန်တော်တက်ရမယ့်ကျောင်းက နယ်ဘက်မှာဆိုတော့ ပထမဆုံးရပ်နားရတဲ့ အဲဒီနိုင်ငံရဲ့ မြို့တော်မှာ နှစ်ရက်လောက် နားရပါတယ်။ ကျွန်တော် တည်းခိုရာ ဟိုတယ် ကနေ မြန်မာသံရုံးကရယ်၊ ပညာရေးကိုင်တဲ့ စစ်သံမှူးရုံးကရယ် လာတွေ့ကြပါတယ်။ အဲဒီမှာ တာဝန်မရှိပေမယ့် တာဝန်သိနေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက် ပါလာပါတယ်။ သူကတော့ နောင်တစ်ချိန် မှာ ကျွန်တော့်မိဘသဖွယ်ဖြစ်လာတဲ့ ကျွန်တော့် ယောက္ခမလောင်းကြီးပါပဲ။
သဘောကောင်းလွန်း ပြီး အလွန်ဖော်ရွေလွန်းတဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့ ယောက္ခမလောင်းကြီးကြောင့် ကျွန်တော်ဟာ ကျွန်တော့ ဇနီးလောင်းမိသားစုများနဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ တွေ့ဆုံ၊ ခင်မင်၊ ရင်းနှီးခဲ့ရပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ကျွန်တော့ ဇနီးလောင်းနဲ့ ကျွန်တော်ဟာ စတင်သိကျွမ်းလာရပါတယ်။ ကျွန်တော် ၂၅၊ သူက ၁၄ ဆိုပါတော့။
ဒီလိုနဲ့ ပညာသင်ပြီးတဲ့နောက် ၁၉၇၆ မှာ မြန်မာပြည်ကို ပြန်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ ဆရာတွေက ရန်ကုန်ကို ပြောင်းဖို့ တဖွဖွခေါ်နေတဲ့ကြားက ဇာတိ မန္တလေးမှာ နှစ်နှစ်လောက် ပေကပ်နေပြီး ၀ါသနာပါရာကို အလုပ်တစ်ဖက်နဲ့ ခေါင်းမာပြီး လုပ်နေခဲ့ပါသေးတယ်။ မန္တလေးက ကျွန်တော့် ကို မောင်းထုတ်လိုက်တော့မှ ကျွန်တော် ရန်ကုန်ကို ပြောင်းဖြစ်တော့တာပါပဲ။ ၁၉၇၇… ။
အဲဒီအချိန်မှာ ကျွန်တော့်ဇနီးလောင်း မိသားစုတွေကလည်း တာဝန်တွေ ပြီးလို့ ရန်ကုန်ပြန် အရောက်၊ ရန်ကုန်မှာ ကျွန်တော်နဲ့ သူတို့နေတဲ့ရပ်ကွက်ကလည်း ကပ်နေတော့ သူတို့နဲ့ ကျွန်တော် ပြန်ပြီးဆက်သွယ်မိကြပြန်ပါတယ်။ ဒါကို ရေစက်လို့ ခေါ်လေမလား၊ ဖူးစာလို့ ခေါ်လေမလား။ ၁၉၇၈… ။
အဲဒီအချိန်မှာတော့ သူမက အလှဆုံးအချိန်၊ တက္ကသိုလ်ပထမနှစ် စတက်တဲ့အချိန်၊ ၁၈ နှစ်အရွယ်၊ တိုတိုပဲ ပြောကြပါစို့ဗျာ ၁၉၇၉ မှာ ကျွန်တော်တို့ အိမ်ထောင်ကျပါတယ်။ ကျွန်တော် ၃၀၊ သူ၁၉။ ဒွေးချိုး လေးတိုးပေါ့ဗျာ။
ကျွန်တော်တို့အိမ်ထောင်ရေးဟာ ပျော်စရာလေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အတွေးအခေါ်ချင်းလည်း ညီ၊ ကမ္ဘာ့အမြင်ချင်းလည်း ညီဆိုတော့ အဲဒီအချိန်တုန်းက ရုန်းကန်ရတဲ့ ဘ၀အမောတွေ ဖြစ်ခဲ့ပေ မယ့် မောတော့ မောတာပေါ့၊ ဒါပေမဲ့ မမောခဲ့ဘူးပေါ့။ပျော်မဆုံး မော်မဆုံး ကာလလေးတွေဟာ ကျွန်တော်တို့ အိမ်ထောင်ရေးမှာ အမှန်တကယ် ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အိမ်ထောင်ရေးတို့ရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း အိမ်ထောင်သက်လေး ရလာတဲ့အခါ “ညှိယူရတဲ့ ကာရန်တွေ” က များများလာ ပါတယ်။
တစ်ခါတစ်ရံ အိမ်ထောင်ရေးတေးသံဟာ သာယာသံပျောက်ပြီး ဘီလူးဆိုင်းဖြစ်ရတဲ့ အကြိမ်တွေလည်း များများလာပါတယ်။ သူပြတ်မယ် ငါပြတ်မယ် ဆိုရတဲ့ အဆင့်အထိ ပြင်းထန်သွားတဲ့ အခါတွေလည်း ရှိခဲ့ပါတယ်။
ခက်တာက ကျွန်တော်ကလည်း ခေါင်းမာတယ်၊ သူကလည်း အနိုင်မခံဘူး။ ကျွန်တော်ကလည်း ဆရာလုပ်ချင်တယ် (ကျောင်းဆရာတစ်ပိုင်းလေဗျာ)။ သူကလည်း အမိန့်ပေးတာ ၀ါသနာပါတယ်။ ကျွန်တော်က အပြစ်ပြောတာ မကြိုက်ဘူး၊ အပြစ်ပြောမခံရအောင်လည်း နေတယ်။ သူက ဝေဖန် တတ်တယ်၊ ကျွန်တော်က လူတွေကို အားနာတတ်တယ်၊ သနားတတ်တယ်။ သူက တိကျတယ်၊ ပြတ်သားတယ်၊ အပိုအလုပ် မလုပ်ဘူး၊ လက်တွေ့ပိုကျတယ်ပေါ့ဗျာ။
ဒီလိုနဲ့ပဲ ကျွန်တော်တို့အိမ်ထောင်ရေးမှာ သားသမီးက သုံးယောက်၊ အိမ်ထောင်သက်က နှစ် ၃၀ ရှိလာခဲ့ပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော် မကြာမကြာ စဉ်းစားလာမိပါတယ်။ အိမ်ထောင်တစ်ခုမှာ ပြောလေ့ရှိပါတယ်၊ စိတ်တူ သဘောတူတဲ့။ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး စိတ်တူ သဘောတူ၊ အကြိုက်တူ၊ အလိုက်သိ၊ ဘာတဲ့ … ငါးခြောက်ဆို ဖုတ်ပြီးသား ဆိုတာတွေလေ။ ဒီလို စိတ်သဘောထား အစစ တိုက်ဆိုင်ပြီး တစ်ဦးအကြိုက် တစ်ဦး လိုက်နေကြတဲ့ မိမတူ ဖမတူ နှစ်ဦး အတူသွား၊ အတူစား၊ အတူလက်တွဲနေကြတာ ဘာများ ဆန်းသလဲ။
ကျွန်တော်တို့လို အစစ အယူအဆအတူကြတဲ့ သူနှစ်ဦး နှစ်ပေါင်းများစွာ အတူလက်တွဲနေထိုင်နိုင်ခဲ့ကြတာ ဘာကြောင့်များပါလဲ။ နားလည် မှုကြောင့် ဆိုမလား၊ သည်းခံစိတ်ကြောင့် ဆိုမလား။
အခုတော့ အသက်ေတွလည်း ကြီးလာကြပါပြီ၊ အကြီးဆုံးသမီးပဲ ဆရာဝန်ဖြစ်၊ အိမ်ထောင်ကျ၊ အခု မြေးတောင် ရနေပါပြီ။
ဇနီးသည်နဲ့ အေးအေး ဆေးဆေး စကားစမြည်ပြောဖြစ်တဲ့ တစ်နေ့ပေါ့။ အများအားဖြင့်လည်း သားရေး သမီးရေး (အလတ်ကောင်က အခုမှ ၁၄ နှစ်နဲ့ အငယ်မက ၁၀ နှစ်ပဲ ရှိပါသေးတယ်၊ ကျွန်တော် အိုချိန်မရသေးပါ)၊ စားရေး သောက်ရေး အလုပ်ကိစ္စတွေနဲ့ အေးအေး လူလူ စကား မပြောဖြစ်ကြတာ များပါတယ်။ အဲဒီ အေးအေးလူလူ စကားပြောဖြစ်တဲ့ တစ်နေ့မှာတော့ . . . ။
ကျွန်တော်။ ။ “ဒီမှာ.. ငါတို့ အိမ်ထောင်ရေးကို ငါ စဉ်းစားနေမိတယ်၊ မင်းနဲ့ ငါနဲ့က ငါက စနေ၊ မင်းက ကြာသပတေး၊ အိမ်ထောင်ရေးနက္ခတ်ချင်း မကိုက်ဘူးလို့ ပြောကြတယ်”(ကျွန်တော့်နိဒါန်းကလည်း ထရိုက်ချင်စရာပါပဲ။)
သူ ။ ။ “အဲဒါ.. ဘာဖြစ်လဲ”
ကျွန်တော်။ ။ “မင်းစဉ်းစားကြည့်လေကွာ ငါက ဒါဆို မင်းက ဟိုဟာ၊ ငါက အားနာတတ်တယ် မင်းက အားမနာတတ်ဘူး၊ ငါက အောင်လင်းကြိုက်တယ် မင်းက ဂျူးမှဂျူး၊ ငါက စန္ဒရားချစ်ဆွေကြိုက်တယ် မင်းက ဇော်ဝင်းထွဋ်ကြိုက်တယ်၊ ဘယ်တုန်းကများ အကြိုက်ချင်း တူခဲ့လို့တုံး”
သူ ။ ။ “ အဲဒါ ဘာဖြစ်လဲ “ (အသံကခပ်မာမာနဲ့ ခပ်ကျယ်ကျယ်ဖြစ်လာပါတယ်။)
ကျွန်တော်။ ။ “ အဲဒီလို မင်းနဲ့ငါနဲ့ဟာ အစစ အကြိုက်တွေ အမြင်တွေက တခြားစီပဲ၊ ဘာမှ ကိုက်ညီတာ မရှိဘူး ”
သူ (အတော်လေးစိတ်ရှုပ်လာပုံပေါက်လာပြီး မျက်နှာတွေလည်း နီလာပါတယ်။)။ ။ “ရှင် ဘာတွေ လာပြောနေပြန်တာလဲ၊ ဘာလဲ ရန်ဖြစ်ချင်ပြန်ပြီလား၊ အဲဒီတော့ ဘာဖြစ်လဲ၊ ရှင်က ဘာပြောချင်တာလဲ”
ကျွန်တော်။ ။ “အဲဒါကိုပဲ ငါစဉ်းစားနေမိတာ၊ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် အစစ အရာရာ သဘောထားချင်းလဲ မတိုက်ဆိုင်၊ အပေးအယူလဲ မတည့်တဲ့ တစ်ဖအေ တစ်မအေစီက ပေါက်ဖွား လာကြတဲ့ မင်းနဲ့ငါနဲ့ဟာ အတူပေါင်းလာခဲ့ကြတာ အခုဆို အနှစ် ၃၀ ရှိတော့မယ်၊ အဲဒါ.. ဘာကြောင့်လို့ မင်းထင်လဲ”
သူ (အတော်စိတ်ရှုပ်လာပုံနဲ့ အသံခပ်ကျယ်ကျယ်နဲ့)။ ။ “ ဘယ်သိမလဲ ”
အဲဒီလိုလည်းပြောလိုက်ရော ကျွန်တော်က သူ့အနားကို ကိုယ်လေးကိုင်းကာ အသာလေး ကပ်လိုက်ပြီး တိုးတိုးလေး နှစ်ကိုယ်ကြား ပြောလိုက်ပါတယ်။
ကျွန်တော်။ ။ “ အဲဒါ အချစ်လို့ ခေါ်တယ် ”
အဲဒီလိုလည်း ကျွန်တော်က ပြောလိုက်ရော သူ့မျက်နှာဟာ လမင်းကြီးလို ၀င်းလက် သွားပါတယ်။ နောက်တော့
သူ (မျက်နှာ ပြုံးပြုံးကြီးနဲ့)။ ။ “ အောင်မယ်… သွား” ဆိုပြီး ကျွန်တော့်ရင်ဘတ်ကို တံတောင်နဲ့ လှမ်းတွက်လိုက်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ဒီတံတောင်မှာ အားမပါဘူးဆိုတာ ကျွန်တော်သာ အသိဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။
( နာဂစ်ရဲ့ ကောလဟာလတွေကြောင့် “ တုံးကျော်ထီးကြီး ” ဖြစ်လာရတဲ့ အဖေကြီး အတွက် စိုးရိမ်ပူပန်စိတ်တွေကြောင့် ရင်ထဲက အချစ်တွေ ပွင့်အန်ကျလာကြတဲ့ ချစ်ဇနီးနဲ့ သားသမီးသုံးဦးသို့ အမှတ်တရ )။
ဆရာကြီး ဦးထွန်းလွင် ( Tun Lwin မိုးလေ၀သ ) ၏ ဆောင်းပါးကို သတင်းအတင်း မီဒီယာ မှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်။
Credit : Thadinatin Media D Khit
ခမျြးခမျြးနဲ့ဘုဏျးသိုကျတို့ ဇနီးမောငျနှံကှာရှငျးသတငျးနဲ့ပတျသကျပွီး ဆရာကွီး ဦးထှနျးလှငျ ( မိုးလဝေသ ) ပွောပွတဲ့ အဖွဈအပကျြ
အဆိုတျောခမျြးခမျြးနဲ့ သရုပျဆောငျ ဘုဏျးသိုကျတို့ ဇနီးမောငျနှံကှာရှငျးခှငျ့တောငျတဲ့သတငျးနဲ့ပတျသကျပွီး ဆရာကွီး ဦးထှနျးလှငျ ( မိုးလဝေသ ) က သူ့ဘဝရဲ့ အတှအေ့ကွုံတဈခုကို အောကျပါအတိုငျးပွောပွခဲ့ပါတယျ ။
ဒီကနမှေ့ ပွနျကွညျ့ဖွဈတဲ့ facebook ပျေါမှာ နိုငျငံကြျောအဆိုတျောမလေးနဲ့ မျောဒယျလျသူ့ယောကျြားလေးတို့ဇနီးမောငျနှံကှာရှငျးခှငျ့တောငျတဲ့သတငျးကိုဖတျမိတယျ။ အဆိုတျောမလေးနာမညျကွီးတုနျးကပေါကျသှားခဲ့တဲ့ သူ့ရဲ့ Title song က ဘာတဲ့ “တကယျဆို အခဈြပဲ လိုတယျ” တဲ့။
လှနျခဲ့တဲ့နှဈထဲကလညျး ကြှနျတျောကိုယျတိုငျ မင်ျဂလာအခမျးအနားမှူးလုပျပေးခဲ့တဲ့တပညျ့လငျမယားနှဈယောကျ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးဌာနမှာ အောကျခွဝေနျထမျးဘဝကစပွီး ပွညျပသှားတာဝနျထမျးဆောငျခှငျ့ရလာတဲ့အထိ ဒိုးတူဘောငျဖကျ ခကျခကျခဲခဲ ကွိုးစားလာခဲ့ပွီး၊ နှဈယောကျသားလညျးကိုယျစီကိုယျစီပွညျပနိုငျငံရုံးတှမှောတာဝနျထမျးဆောငျခှငျ့လညျးရရော လငျမယားကှဲကွပွနျတယျ။
အမမေတူအဖမေတူလူသား(၂)ဦးအတူ ယှဉျတှဲနထေိုငျဖို့ဆိုတာ အကယျတော့မလှယျလှပါဘူး။ ဒီနရောမှာ ကြှနျတျောလညျး ကြှနျတော့အိမျထောငျရေးကိုဘယျလိုအတှေးမြိုးတှနေဲကထိနျသိမျးခဲံတယျဆိုတာ လူငယျတှကေို ပွနျပွောခငျြလာပါတယျ။
မောငျထှနျးလှငျ (မိုးလဝေသ)ရဲ့ “ငယျခဈြ….နှငျ့” စာအုပျမှ။
ကြှနျတေျာ့ဇနီးကို ကြှနျတျော ပွညျပနိုငျငံကွီးတဈခုမှာ ၁၉၇၃ ခုနှဈလောကျမှာ စတငျတှခေဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။ ကြှနျတျောက အစိုးရရဲ့ ခှငျ့ပွုခကျြနဲ့ အဲဒီနိုငျငံကွီးကို ပထမဆုံးအကွိမျအဖွဈနဲ့ ပညာတျောသငျသှားရတဲ့အကွိမျပေါ့။ အဲဒီအခြိနျမှာ အဲဒီနိုငျငံရဲ့ သတငျးဌာနကွီးတဈခုမှာ တာဝနျထမျးဆောငျရငျးနဲ့ သူတို့ မိသားစုက ကြှနျတေျာ့ထကျ အရငျ နှဈနှဈလောကျကတညျးက ရောကျနှငျ့နခေဲ့ကွတာပါ။
ဒီခရီးဟာ ကြှနျတေျာ့ရဲ့ ပထမဆုံးပွညျပခရီးလညျး ဖွဈနတောကွောငျ့ ကြှနျတျောဟာ တကယျ့ကို တောသားမွို့ရောကျ ပါပဲ။ အရာရာဟာ အထူးထူး အဆနျးဆနျးခညျြးပါပဲ။ အတှအေ့ကွုံကလညျး မရှိ၊ အသိအကြှမျးကလညျး မရှိ၊ ဘာဆိုဘာမှ မသိ နတ်ထိ။ မကျြစိသူငယျ နားသူငယျဆိုတာ ဒါကိုချေါတာ ဖွဈပါလိမျ့မယျ။
အဲဒီအခြိနျမှာ ကြှနျတျောတကျရမယျ့ကြောငျးက နယျဘကျမှာဆိုတော့ ပထမဆုံးရပျနားရတဲ့ အဲဒီနိုငျငံရဲ့ မွို့တျောမှာ နှဈရကျလောကျ နားရပါတယျ။ ကြှနျတျော တညျးခိုရာ ဟိုတယျ ကနေ မွနျမာသံရုံးကရယျ၊ ပညာရေးကိုငျတဲ့ စဈသံမှူးရုံးကရယျ လာတှကွေ့ပါတယျ။ အဲဒီမှာ တာဝနျမရှိပမေယျ့ တာဝနျသိနတေဲ့ ပုဂ်ဂိုလျတဈယောကျ ပါလာပါတယျ။ သူကတော့ နောငျတဈခြိနျ မှာ ကြှနျတေျာ့မိဘသဖှယျဖွဈလာတဲ့ ကြှနျတေျာ့ ယောက်ခမလောငျးကွီးပါပဲ။
သဘောကောငျးလှနျး ပွီး အလှနျဖျောရှလှေနျးတဲ့ ကြှနျတေျာ့ရဲ့ ယောက်ခမလောငျးကွီးကွောငျ့ ကြှနျတျောဟာ ကြှနျတော့ ဇနီးလောငျးမိသားစုမြားနဲ့ နောကျပိုငျးမှာ တှဆေုံ့၊ ခငျမငျ၊ ရငျးနှီးခဲ့ရပါတယျ။ ဒီလိုနဲ့ ကြှနျတော့ ဇနီးလောငျးနဲ့ ကြှနျတျောဟာ စတငျသိကြှမျးလာရပါတယျ။ ကြှနျတျော ၂၅၊ သူက ၁၄ ဆိုပါတော့။
ဒီလိုနဲ့ ပညာသငျပွီးတဲ့နောကျ ၁၉၇၆ မှာ မွနျမာပွညျကို ပွနျရောကျခဲ့ပါတယျ။ ဆရာတှကေ ရနျကုနျကို ပွောငျးဖို့ တဖှဖှချေါနတေဲ့ကွားက ဇာတိ မန်တလေးမှာ နှဈနှဈလောကျ ပကေပျနပွေီး ၀ါသနာပါရာကို အလုပျတဈဖကျနဲ့ ခေါငျးမာပွီး လုပျနခေဲ့ပါသေးတယျ။ မန်တလေးက ကြှနျတေျာ့ ကို မောငျးထုတျလိုကျတော့မှ ကြှနျတျော ရနျကုနျကို ပွောငျးဖွဈတော့တာပါပဲ။ ၁၉၇၇… ။
အဲဒီအခြိနျမှာ ကြှနျတေျာ့ဇနီးလောငျး မိသားစုတှကေလညျး တာဝနျတှေ ပွီးလို့ ရနျကုနျပွနျ အရောကျ၊ ရနျကုနျမှာ ကြှနျတျောနဲ့ သူတို့နတေဲ့ရပျကှကျကလညျး ကပျနတေော့ သူတို့နဲ့ ကြှနျတျော ပွနျပွီးဆကျသှယျမိကွပွနျပါတယျ။ ဒါကို ရစေကျလို့ ချေါလမေလား၊ ဖူးစာလို့ ချေါလမေလား။ ၁၉၇၈… ။
အဲဒီအခြိနျမှာတော့ သူမက အလှဆုံးအခြိနျ၊ တက်ကသိုလျပထမနှဈ စတကျတဲ့အခြိနျ၊ ၁၈ နှဈအရှယျ၊ တိုတိုပဲ ပွောကွပါစို့ဗြာ ၁၉၇၉ မှာ ကြှနျတျောတို့ အိမျထောငျကပြါတယျ။ ကြှနျတျော ၃၀၊ သူ၁၉။ ဒှေးခြိုး လေးတိုးပေါ့ဗြာ။
ကြှနျတျောတို့အိမျထောငျရေးဟာ ပြျောစရာလေးဖွဈခဲ့ပါတယျ။ အတှေးအချေါခငျြးလညျး ညီ၊ ကမ်ဘာ့အမွငျခငျြးလညျး ညီဆိုတော့ အဲဒီအခြိနျတုနျးက ရုနျးကနျရတဲ့ ဘဝအမောတှေ ဖွဈခဲ့ပေ မယျ့ မောတော့ မောတာပေါ့၊ ဒါပမေဲ့ မမောခဲ့ဘူးပေါ့။ပြျောမဆုံး မျောမဆုံး ကာလလေးတှဟော ကြှနျတျောတို့ အိမျထောငျရေးမှာ အမှနျတကယျ ရှိခဲ့ပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ အိမျထောငျရေးတို့ရဲ့ ထုံးစံအတိုငျး အိမျထောငျသကျလေး ရလာတဲ့အခါ “ညှိယူရတဲ့ ကာရနျတှေ” က မြားမြားလာ ပါတယျ။
တဈခါတဈရံ အိမျထောငျရေးတေးသံဟာ သာယာသံပြောကျပွီး ဘီလူးဆိုငျးဖွဈရတဲ့ အကွိမျတှလေညျး မြားမြားလာပါတယျ။ သူပွတျမယျ ငါပွတျမယျ ဆိုရတဲ့ အဆငျ့အထိ ပွငျးထနျသှားတဲ့ အခါတှလေညျး ရှိခဲ့ပါတယျ။
ခကျတာက ကြှနျတျောကလညျး ခေါငျးမာတယျ၊ သူကလညျး အနိုငျမခံဘူး။ ကြှနျတျောကလညျး ဆရာလုပျခငျြတယျ (ကြောငျးဆရာတဈပိုငျးလဗြော)။ သူကလညျး အမိနျ့ပေးတာ ၀ါသနာပါတယျ။ ကြှနျတျောက အပွဈပွောတာ မကွိုကျဘူး၊ အပွဈပွောမခံရအောငျလညျး နတေယျ။ သူက ဝဖေနျ တတျတယျ၊ ကြှနျတျောက လူတှကေို အားနာတတျတယျ၊ သနားတတျတယျ။ သူက တိကတြယျ၊ ပွတျသားတယျ၊ အပိုအလုပျ မလုပျဘူး၊ လကျတှပေို့ကတြယျပေါ့ဗြာ။
ဒီလိုနဲ့ပဲ ကြှနျတျောတို့အိမျထောငျရေးမှာ သားသမီးက သုံးယောကျ၊ အိမျထောငျသကျက နှဈ ၃၀ ရှိလာခဲ့ပါတယျ။
ဒီနရောမှာ ကြှနျတျော မကွာမကွာ စဉျးစားလာမိပါတယျ။ အိမျထောငျတဈခုမှာ ပွောလရှေိ့ပါတယျ၊ စိတျတူ သဘောတူတဲ့။ တဈဦးနဲ့တဈဦး စိတျတူ သဘောတူ၊ အကွိုကျတူ၊ အလိုကျသိ၊ ဘာတဲ့ … ငါးခွောကျဆို ဖုတျပွီးသား ဆိုတာတှလေေ။ ဒီလို စိတျသဘောထား အစစ တိုကျဆိုငျပွီး တဈဦးအကွိုကျ တဈဦး လိုကျနကွေတဲ့ မိမတူ ဖမတူ နှဈဦး အတူသှား၊ အတူစား၊ အတူလကျတှဲနကွေတာ ဘာမြား ဆနျးသလဲ။
ကြှနျတျောတို့လို အစစ အယူအဆအတူကွတဲ့ သူနှဈဦး နှဈပေါငျးမြားစှာ အတူလကျတှဲနထေိုငျနိုငျခဲ့ကွတာ ဘာကွောငျ့မြားပါလဲ။ နားလညျ မှုကွောငျ့ ဆိုမလား၊ သညျးခံစိတျကွောငျ့ ဆိုမလား။
အခုတော့ အသကျေတှလညျး ကွီးလာကွပါပွီ၊ အကွီးဆုံးသမီးပဲ ဆရာဝနျဖွဈ၊ အိမျထောငျကြ၊ အခု မွေးတောငျ ရနပေါပွီ။
ဇနီးသညျနဲ့ အေးအေး ဆေးဆေး စကားစမွညျပွောဖွဈတဲ့ တဈနပေ့ေါ့။ အမြားအားဖွငျ့လညျး သားရေး သမီးရေး (အလတျကောငျက အခုမှ ၁၄ နှဈနဲ့ အငယျမက ၁၀ နှဈပဲ ရှိပါသေးတယျ၊ ကြှနျတျော အိုခြိနျမရသေးပါ)၊ စားရေး သောကျရေး အလုပျကိစ်စတှနေဲ့ အေးအေး လူလူ စကား မပွောဖွဈကွတာ မြားပါတယျ။ အဲဒီ အေးအေးလူလူ စကားပွောဖွဈတဲ့ တဈနမှေ့ာတော့ . . . ။
ကြှနျတျော။ ။ “ဒီမှာ.. ငါတို့ အိမျထောငျရေးကို ငါ စဉျးစားနမေိတယျ၊ မငျးနဲ့ ငါနဲ့က ငါက စနေ၊ မငျးက ကွာသပတေး၊ အိမျထောငျရေးနက်ခတျခငျြး မကိုကျဘူးလို့ ပွောကွတယျ”(ကြှနျတေျာ့နိဒါနျးကလညျး ထရိုကျခငျြစရာပါပဲ။)
သူ ။ ။ “အဲဒါ.. ဘာဖွဈလဲ”
ကြှနျတျော။ ။ “မငျးစဉျးစားကွညျ့လကှော ငါက ဒါဆို မငျးက ဟိုဟာ၊ ငါက အားနာတတျတယျ မငျးက အားမနာတတျဘူး၊ ငါက အောငျလငျးကွိုကျတယျ မငျးက ဂြူးမှဂြူး၊ ငါက စန်ဒရားခဈြဆှကွေိုကျတယျ မငျးက ဇျောဝငျးထှဋျကွိုကျတယျ၊ ဘယျတုနျးကမြား အကွိုကျခငျြး တူခဲ့လို့တုံး”
သူ ။ ။ “ အဲဒါ ဘာဖွဈလဲ “ (အသံကခပျမာမာနဲ့ ခပျကယျြကယျြဖွဈလာပါတယျ။)
ကြှနျတျော။ ။ “ အဲဒီလို မငျးနဲ့ငါနဲ့ဟာ အစစ အကွိုကျတှေ အမွငျတှကေ တခွားစီပဲ၊ ဘာမှ ကိုကျညီတာ မရှိဘူး ”
သူ (အတျောလေးစိတျရှုပျလာပုံပေါကျလာပွီး မကျြနှာတှလေညျး နီလာပါတယျ။)။ ။ “ရှငျ ဘာတှေ လာပွောနပွေနျတာလဲ၊ ဘာလဲ ရနျဖွဈခငျြပွနျပွီလား၊ အဲဒီတော့ ဘာဖွဈလဲ၊ ရှငျက ဘာပွောခငျြတာလဲ”
ကြှနျတျော။ ။ “အဲဒါကိုပဲ ငါစဉျးစားနမေိတာ၊ တဈယောကျနဲ့ တဈယောကျ အစစ အရာရာ သဘောထားခငျြးလဲ မတိုကျဆိုငျ၊ အပေးအယူလဲ မတညျ့တဲ့ တဈဖအေ တဈမအစေီက ပေါကျဖှား လာကွတဲ့ မငျးနဲ့ငါနဲ့ဟာ အတူပေါငျးလာခဲ့ကွတာ အခုဆို အနှဈ ၃၀ ရှိတော့မယျ၊ အဲဒါ.. ဘာကွောငျ့လို့ မငျးထငျလဲ”
သူ (အတျောစိတျရှုပျလာပုံနဲ့ အသံခပျကယျြကယျြနဲ့)။ ။ “ ဘယျသိမလဲ ”
အဲဒီလိုလညျးပွောလိုကျရော ကြှနျတျောက သူ့အနားကို ကိုယျလေးကိုငျးကာ အသာလေး ကပျလိုကျပွီး တိုးတိုးလေး နှဈကိုယျကွား ပွောလိုကျပါတယျ။
ကြှနျတျော။ ။ “ အဲဒါ အခဈြလို့ ချေါတယျ ”
အဲဒီလိုလညျး ကြှနျတျောက ပွောလိုကျရော သူ့မကျြနှာဟာ လမငျးကွီးလို ၀ငျးလကျ သှားပါတယျ။ နောကျတော့
သူ (မကျြနှာ ပွုံးပွုံးကွီးနဲ့)။ ။ “ အောငျမယျ… သှား” ဆိုပွီး ကြှနျတေျာ့ရငျဘတျကို တံတောငျနဲ့ လှမျးတှကျလိုကျပါတယျ။
ဒါပမေဲ့ ဒီတံတောငျမှာ အားမပါဘူးဆိုတာ ကြှနျတျောသာ အသိဆုံး ဖွဈပါတယျ။
( နာဂဈရဲ့ ကောလဟာလတှကွေောငျ့ “ တုံးကြျောထီးကွီး ” ဖွဈလာရတဲ့ အဖကွေီး အတှကျ စိုးရိမျပူပနျစိတျတှကွေောငျ့ ရငျထဲက အခဈြတှေ ပှငျ့အနျကလြာကွတဲ့ ခဈြဇနီးနဲ့ သားသမီးသုံးဦးသို့ အမှတျတရ )။
ဆရာကွီး ဦးထှနျးလှငျ ( Tun Lwin မိုးလဝေသ ) ၏ ဆောငျးပါးကို သတငျးအတငျး မီဒီယာ မှ ကူးယူဖျောပွပါသညျ။
အကိုအရင်းက မုဒိန်းကျင့်​လို့ ကိုယ်​၀န်​ ၇ လ ရှိ​နေတဲ့ ​ကောင်​မ​လေး အဖြစ်
ရတနာပစ္စည်းများ ရက်ရောစွာ ဖြုတ်လှူကြတဲ့ တရားပွဲ
ဂျပန်က အပြာစာအုပ်ထဲမှာ ဆူးလေစေတီပုံနဲ့ မြန်မာမလေးတွေ ရောက်နေပြီ
ဆိုင်ကယ်ထိုင်ခုံအောက် ငွေထည့်တတ်သူများ သတိရှိရန်